जाडो र गर्मी : एउटै मौसम तर कसैलाईकम, कसैलाई बेसी किन लाग्छ ?
भरखर भरखरैको कुरा हो, एउटा विवाह भोजमा जाने निम्तो आयो । निम्तो मान्नहामी सपरिवार भोजमा सरिक भयौं । जाडोको महिना हामी सबैले बाक्लै लुगा लगाएकाथियौं । तर सो विवाहमा सरिक केही महिलाहरु भने विपरीत पोशाकमा थिए । उनीहरुकोपातलो पोशाक देखेर मेरी १० वर्षीया छोरीले मसँग बालसुलभ प्रश्न गरिन् ः बाबा,हामीलाई त जाडो लागिरहेको छ, तर आन्टीहरुलाई चाहिँ जाडो लाग्दैन हो ? उनकोबालसुलभ प्रश्नको ठोस उत्तर मसँग थिएन । त्यसैले फिस्स हाँसेर टारिदिए । सत्य कुराचाहिँ के हो भने जाडो सबैलाई लाग्ने गर्छ । कुरा कम बेसी मात्राको मात्रै हो ।
हो, एउटै वातावरणमा पनि कसैलाई कम जाडो लाग्ने, कसैलाई बेसी जाडो लाग्नेचाहिँ अवश्य हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ त ? आउनुहोस्, जाडोको बारेमा केही चर्चा गरौं ।सन् २०१९ को जुलाइ २९ को दिन फ्रान्सको इतिहासमै तापक्रम अति वेसी ४५.९ डिग्रीसेन्टिग्रेट पुग्यो । त्यो भनेको ११४ फरेन्टहाइट हो । प्रचण्ड गर्मीका कारण जनजीवनआकुलव्याकुल भयो । तर त्यस्तो प्रचण्ड गर्मीमा पनि केही मानिसहरुले चाहिँ त्यस्तोगर्मी महसुस गरेनन् । उता केही मानिसहरु चाहिँ यस्ता पनि हुन्छन्, चाहे जुनसकैमौसम किन नहोस्, सधैं जाडो लाग्ने गर्छ । यसरी एउटै मौसममा पनि कोही मानिसलाईबढी जाडो लाग्ने र कसैलाई कम लाग्ने वा लाग्दैनलाग्ने हुनुका पछाडि वैज्ञानिक कारणछन् । यो थाहा पाउनको लागि हाम्रो शरीरको तापक्रमले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहापाउनु जरुरी छ । सर्वप्रथमतः स्तनपायी जनावरहरु र चरा तातो रक्तसमूहका प्राणीमापर्दछन् । यसको अर्थ के हो भने यो रक्त समूहका प्राणीहरुले आफ्नो शरीरको तापक्रमाआफैं नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्छ । स्वभाविक रुपमा मानिसमा पनि यो क्षमता हुन्छकिनभने मानिस आफैं पनि स्तनपायी प्राणी हो । त्यसको विपरीत चिसो रक्तसमूहमा पर्नेप्राणीहरु जस्तै, सर्प, छेपारो, गोहीहरुले चाहिँ आफ्नो शरीरको तापक्रमलाई नियन्त्रण रनियमन गर्न सक्दैन । उनीहरु शरीरको तापक्रमलाई चाहिने मात्रामा राख्नको लागिवरिपरिको तापक्रममा भरपर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो शरीरमा तापक्रमलाई नियन्त्रण र नियमनगर्ने काम हाम्रो मस्तिष्कको एउटा खास भागले गर्ने गर्छ, जसलाई हाइपोथालामस भन्नेगरिन्छ । मस्तिष्कको यो भागले हाम्रो शरीरको लागि थर्मोसेटले जस्तै काम गर्ने गर्छ ।मानिसको शरीरको लागि औसत तापक्रम ९८.६ डिग्री फरेनहाइट हो । तर शरीरकोतापक्रमलाई नियमन गर्ने कुरा भनेको हिटर वा एसीमा जस्तो बटन थिचेको चाहिएकोतापक्रम प्राप्त गरे जस्तो सहज नभई यो अलि जटील प्रक्रिया नै हो । शरीरकोतापक्रमलाई ठिक्कको अवस्थामा राखिराख्नको लागि हाइपोथालामासले शरीरका विभिन्नभागहरुलाई नियन्त्रण र यस कार्यको लागि सञ्चालन गर्ने काम गरिरहनु परेको हुन्छ ।कुनै पनि कारणले यी अंगहरुबीचको समन्वयमा गडबढी आयो भने हाम्रो शरीरकोतापक्रम ९८.६ डिग्री फरेनहाइट भन्दा तलमाथि हुन जान्छ । शीरको तापक्रमलाईठिक्क राखिराख्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो सूचना हाम्रो शरीरकोछालाले मस्तिष्कलाई दिइरहेको हुन्छ । वास्तवमै, मानव शरीरमा छाला यस्तो प्रमुखअंग हो, जसले शरीरका अन्य अंगहरुको तुलनामा सबैभन्दा पहिले र बेसी बाहिरीसंसारका चीजबीजहरुसँग सम्पर्कमा रहेको हुन्छ ।जब वाहिर तापक्रम हाम्रो शरीरलाई चाहिनेभन्दा बढी हुन्छ, हाम्रो शरीरमाभासोडाइलेसन (ख्बकयमष्बितष्यल) को प्रक्रिया शुरु हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई पसिनाआउन थाल्छ । यसरी पसिना आउँदा सम्पन्न हुने वाष्पीकरणको प्रक्रियाले हाम्रो शरीरकोतापक्रमलाई घटाउन मद्दत गर्छ । त्यसको ठीक विपरीत जब बाहिर शरीरलाई चाहिनेतापक्रमभन्दा कम चिसो बढेर जान्छ, त्यसबेला हाम्रो छालामा भासोकन्स्ट्रिक्सन (ख्बकयअयलकतचष्अतष्यल) को प्रक्रिया शुरु हुन्छ । यो बेलामा हाम्रो छालामा काँडाउम्रन्छ । वास्तवमा, त्यो काँडा उम्रनु (न्ययकभदगmउक) भनेको पनि शरीरले तापक्रमलाईसन्तुलित राख्ने क्रममा सिर्जित स्वभाविक प्रक्रिया नै हो । केही मानिसहरुमा अटोनोमिकडाइसरेफ्लेक्सिया नाम गरेको अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन अवस्थामा उनीहरुको स्नायुप्रणालीले त्यो अवस्थाका विरुद्धमा अलि बढी नै प्रतिक्रिया जनाउँछ । त्यो वस्थामाउनीहरुको शरीर अनावश्यक रुपमै भासोडाइलेसनको स्थितिमा पुग्छ र अति बढीमात्रामा पसिना निस्कन थाल्छ । फेरि त्यसको ठीक केहीमा चाहिँ अति नै जाडो लागेरबढी नै काँडा उम्रने हुन्छ । त्यसो त कसैलाई बढी जाडो वा गर्मी लाग्ने र कसैलाई कमलाग्ने हुनुमा अरु कारणहरु पनि हुन्छन् । सामान्य रुपमा भन्दा पुरुषको तुलनामामहिलाहरुलाई बढी जाडो लाग्ने गर्छ । हात मात्रै छाम्दा पनि औसत रुपमा महिलाकोहातको तापक्रम पुरुषको भन्दा ३ डिग्री फरेनहाइट कम नै हुन्छ । यसो हुनुको पछाडिकारण छ । यसो हुनको कारण चाहिँ पुरुषको शरीमरा मासुको मात्रा बढी हुनु रमहिलाको शरीरमा चाहिँ तुलनात्मक रुपमा बढी बोसो हुनुलाई मानिएको छ । सामान्यतःमांसपेशीहरुले काम गर्दा तापक्रम पैदा गर्छ भने बोसोका कोषहरुले चाहिँ तापक्रमलाईसञ्चय गर्ने काम गर्छ । जाडो हुँदा हामी काम्नुको कारण पनि यही नै हो । जाडोमा हामीकाम्दा मांसपेशी चाँचाँडो चल्न थाल्छ, फलतः शरीरमा तातोपन बढेर जान्छ । हाम्रोशरीरमा तापक्रमलाई नियन्त्रित गर्ने एउटा मुख्य पक्ष भनेको रगतको बगाइ पनि हो ।सम्भवतः यही प्रक्रियाबाट नै तातो रक्तसमूह भन्ने शब्द आएको हुन सक्छ । त्यसकारण,हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चारलाई उत्प्रेरित गर्ने वा बढाइदिने कुनै पनि कामले तपाईंकोशरीरमा तापक्रमको मात्रालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने गर्छ । उदाहरणको लागि, बढीकोलेस्ट्रोल खानेकुराहरुले हाम्रो शरीरमा रक्तसञ्चारको प्रक्रियालाई सुस्त बनाइदिन्छ ।रगतमा कोलेस्ट्रोल बढी हुँदा हाम्रो हात खुट्टाहरुमा तातो रगत पुग्न कठीन हुन्छ । यहीकारण नै बढी कोलेस्ट्रोल हुने मानिसहरु आफ्नो हातखुट्टाका औंलाहरु चिसो भएकोगुनासो अरुको तुलनामा बढी गर्ने गर्छन् । हामी बुढो हुँदै जाँदा हाम्रो प्राकृतिक प्रणालीकोप्रभावकारिता पनि कमजोर हुँदै जान्छ । यो कुरा हाम्रो शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्नेप्रणालीमा पनि लागू हुन्छ । कम रक्तचाप, शरीरमा कम मासु र कमजोर पाचनप्रणालीले पनि हाम्रो शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्ने प्रणालीलाई झनै खराब बनाइदिन्छ ।सामान्य मानिसहरुको तुलनामा बुढापाका उमेरका मानिसहरुलाई बढी जाडो लाग्नुकोएउटा कारण यो पनि हो ।
त्यसकारण, आफ्नो शरीरको अवस्थाका बारेमा ख्याल राख्नु अति जरुरी हुन्छ ।तपाईं कुनै अरु प्राकृतिक वा बाह्य कारण बेगर नै पनि जाडो महसूस गर्न थाल्नु हुन्छभने तपाईंलाई विरामी भएको महसुस हुन्छ र ज्वरो आउँछ । त्यसैगरी, जाडो लागिबस्नेस्थितिले पनि तपाईंलाई डायबिटिज लगायत अन्य कुनै गम्भीर रोग लागेको कुराकोसंकेत पनि हुन सक्छ । अति धेरै तातो हावाहरु चलेको बेलामा पनि लगातार चिसोमहसूस भइरहनु चाहिँ आरामदायी नै हुन सक्छ तर त्यसबाट झुक्किनु हुँदैन । हाम्रोशरीरले निश्चित तापक्रममा मात्रै सही ढंगले काम गर्न सक्छ । यस अर्थमा हाम्रोशरीरका प्रणालीले ठीक ढंगले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नु महत्वपूर्णहुन्छ । घरको तापक्रम सुनिश्चित गरिबस्ने एयर कन्डिसनर, हिटर जस्ता चीजहरुविग्रियो भने बनाउनको लागि हामी मेकानिक बोलाउने गर्छौं । ठीक त्यसै गरी, तपाईंलेअनावश्यक रुपमा र बिनाकारण चिसो महसूस गरिरहनुभएको छ भने सबैभन्दा जरुरीकुरा चिकित्सकसँग सल्लाह गरिहाल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा तपाईंको शारीरिक अवस्था ठीकरहे नरहेको तथा शरीरको तापक्रम ठीक अवस्थामा राख्ने प्रणालीले सही ढंगले काम गरेनगरेको पहिचान गर्न सकिन्छ ।